Galaxy S6 setịpụrụ ndekọ ọhụrụ na AnTuTu | Gam akporosis
N'ime izu ole na ole Anyị ga-ama ihe niile gbasara ọkwa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Korea nke Samsung, kpọmkwem Galaxy S6 ọhụrụ. A ọnụ ọhụrụ nke a na-atụ anya ọtụtụ ihe karịa na mbipụta ọhụrụ a iji hụ ma ọ ga-ekwe omume ịpụ site na ụdị ụdị ndị gara aga dị na afọ ndị gara aga. Ihe mgbakwunye ọhụrụ nke anyị na-ele anya ugbu a ịmara iji kpochapụ obi abụọ maka ụbọchị mbụ nke Machị mgbe ewepụtara ya na MWC 2015.
Taa bụ otu n'ime ụbọchị ndị ahụ ebe anyị ga-amata nkọwa niile nke ekwentị a ekele ya gafere otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu benchmarking ngwaọrụ olee otu AnTuTu. Iji malite, ihe nlere anya nke Galaxy S6 nke a hụworo site na ngwá ọrụ a bụ SM-G925W8. Ngwaọrụ a nwere n'ime mgbawa Exynos octa-core 7420, CPU nke emere na 14 nm na nke eserese ARM Mali-T760 so.
1 S6 nwere Exynos
2 Ihe ndekọ ọhụụ ọhụrụ maka Galaxy S6
S6 nwere Exynos
Ihe nlere anya a huru na AnTuTu nwere Samsung n’onwe ya dika onye na-eweputa ya Exynos chip na 14 nm. Ga jiri ya tụnyere nke Snapdragon 810 n'onwe ya E wuru Qualcomm n'okpuru 20nm. Ihe dị iche iche ichebara echiche.
Maka ihe ndị ọzọ nkọwa, a 5.1-anụ ọhịa Super AMOLED ihuenyo na 1440 x 2560 mkpebi, 3 GB nke Ram, 32 GB nke nchekwa dị n'ime, igwefoto 20 megapixel na 5 MP n'ihu igwefoto iji were ụdị selfies niile. Site na ihe anyị nwere ike ịhụ site na nkọwa ndị a ọ dịka ihe na-apụta na asịrị dị iche iche nke izu ndị gara aga.
Ihe ndekọ ọhụụ ọhụrụ maka Galaxy S6
New Galaxy S6 etinyewo a ndekọ ọhụrụ maka AnTuTu nwere akara 60.978. Na ebe Exynos 7520 mgbawa a kawanye mma ma e jiri ya tụnyere nke ochie Exynos 5433 bụ n'ụzọ ziri ezi na nyocha nke ihe 3D. A mma na egwuregwu na gam akporo ga-erite uru na ndị ọrụ niile nwere ngwaọrụ mkpanaka igwu egwu egwuregwu.
Ihe omume ahụ Akwadoghị iji chee Galaxy ọhụrụ ahụ na Machị 1, ya mere, ọ dịghị ihe karịrị izu ole na ole. Ọ bụ ezie na agbanyeghị tupu anyị ga-enwe ozi ọhụụ na ọfụma karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Galaxy S6 gafere AnTuTu na-egosi nkọwa ya niile
Pepe Espinar Vega ebe obibi dijo
Mana ha ekwughi ụnyaahụ na Galaxy S6 ga-ebu 4 GB Ram?
Kwa ubochi ekwenyeghi m na ihe omuma a nile.
Zaghachi Pepe Espinar Vega
Emere ọkwa ahụ dị ka asịrị. Na asịrị ọ dịghị ihe edoziri, taa bụ ezigbo akụkọ mgbe ị na-aga site na benchmarking, mana ọ ga-edobe nkwenye ndị ọrụ mgbe niile.
OnePlus gbanwere usoro ahia nnabata ya